[20 / 02 / 2020] Jenareta muYHT Kuchengeta Vehicle Flames	54 Sakarya
[20 / 02 / 2020] 120-Gore reDerbent Chitima Chiteshi pane Agenda yeMusangano	41 Kocaeli
[20 / 02 / 2020] SAMULAŞ Disinfisiti Trams uye Mabhazi Anopesana Nehutachiona	55 Samsun
Turkey, logistics nzvimbo kuti amutse $ 1 tiririyoni ekisipoti kwezvivako basa racho atora kuitwa. 25 yezvikamu makumi maviri neshanu zvezvikamu zvarongwa zvakatanga kushanda mashandiro. 9 nzvimbo dzekuchengetera zvinhu, dzakavakwa kwapera, dzakagadzirira kuvhurwa. [More ...]
Istanbul metro mepu 2020: Nedzimba dzekuvaka dzichatanga kubva gore rinouya, paine mutsetse we2030 makiromita pakupera kwa776, Istanbul ndiyo yechipiri refu refu metro network munyika mushure meNew York. [More ...]
Kayseri Veruzhinji Zvokufambisa Zvimotokari zvinotakura 135 Million Pass Pass
Kayseri Metropolitan Municipality yakatakura vanhu vangangosvika 2019 miriyoni pagore ra135 nezvifambiso zvevoruzhinji pakati peguta. Metropolitan Municipality Transportation Inc. zvifambiso zvevoruzhinji zvichitungamirwa nevapfuuri vanosvika 135 miriyoni gore rapfuura 69 [More ...]
Mersin Metro Inounza Iro Guta Iro Inozora Guta
Mersin Metropolitan Meya Vahap Seçer akasangana pamwe nevamabhizinesi enhengo dzesangano iri pamusangano wakarongwa neMersin Industrialists uye Businessmen Association (MESİAD) Mutungamiri Hasan Engin. Kutsanangura kwavanoita mari muMersin [More ...]
Vachitaura paMusangano Wokutanga Werwendo Welding weGayrettepe-Istanbul Airport Metro Project, iyo yakaitwa neMutungamiri Recep Tayyip Erdogan, Gurukota Turhan nhasi muenzaniso wakanaka wekudyara kweMinistry muhurumende njanji system. [More ...]
Mepu ye Antray - Antalya Tram
2010 yakaiswa mukushandira muAntalya neMetropolitan Municipality yeAntalya. Etap Mwenje Rail mutsara unotanga kubva kuFatih nzvimbo uye unopera kuMeydan station nzvimbo. Mutsetse nezve 1 km. Vaperekedzi ve11 [More ...]
Essen Metro Mepu: Vanhu vazhinji vanoona Essen seguta guru remagetsi. Imba kumakambani maviri makuru emagetsi, E.ON SE uye RWE AG. Zvichida pakati pezana ramakumi maviri emakore [More ...]
Istanbul Ankara Yekumhanya Yekukurumidza Chitima Mugwagwa 2020
Istanbul Ankara Yakamhanya Yekufamba Mutsetse Route Map 2020: Ankara Istanbul High Speed ​​Chitima 9 inomira Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze uye Pendik zvakatemwa. Ankara [More ...]
Madrid Metro Mepu Nguva uye Tiketi Deals
Madrid Metro Mepu Expeditions uye Mitengo YeTiketi: Madrid metros inotakura vafambi vanosvika zviuru mazana mashanu neshanu pagore yave iripo kubva muna560,9 uye inoshanda neMetro de Madrid. Metro network 1919 mitsara uye 13 mamaira [More ...]
Ankara Metro Shanduro Nguva neMepu
Ankara Metro Stations uye Flight Time Map: mabhazi webasa Ankara, guta guru Turkey, iyo Ankara Metropolitan Municipality General Directorate of Ini njanji zvifambiso Network. Iripo Ankara njanji yekufambisa [More ...]
Denizli Izmir Chitima Chinotora Mepu uye Tiketi Mitengo: Izmir Basmane Denizli Dunhu Chitima inoshanda neTCDD Kufambisa. [More ...]
Jenareta muYHT Kuchengeta Vehicle Flames
120-Gore reDerbent Chitima Chiteshi pane Agenda yeMusangano
SAMULAŞ Disinfisiti Trams uye Mabhazi Anopesana Nehutachiona
Nyowani Ferrari SF1000 Kutanga Kuratidzwa paTrack
World Motocross Makwikwi Kutanga neMotobike 2020
Corona Virus Nokuda Volkswagen uye Peugeot Part Receivables kubva Turkey